ဗြိတိသျှကောင်စီမှ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းသစ်များကို ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁၄) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ - Myanmar Network
ဗြိတိသျှကောင်စီမှ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းသစ်များကို ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁၄) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Ummay Ayman on November 17, 2012 at 11:24 in ပညာရေး အခွင့်အလမ်းများ
ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲများကို ဇန်နဝါရီလ (၇)၊ (၈)၊ (၉) နှင့် (၁၁) ရက်နေ့တို့တွင်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သဖြင့် (အသက် ၇ နှစ်နှင့် အထက် မည်သူမဆို) တက်ရောက်လိုသူများ လာရောက်ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။
ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲကြေးမှာ မြန်မာငွေ တစ်သောင်းကျပ်ဖြစ်ပြီး မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြား (သို့မဟုတ်) သန်းခါင်စာရင်း/မွေးစာရင်း မူရင်းဖြင့် ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲဖြေရန် နိုဝင်ဘာလ (၁၉) ရက်နေ့ မှစ၍ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ နံနက် (၉:ဝဝ) မှ ညနေ (၅:ဝဝ) အတွင်းလာရောက် စာရင်းသွင်းနိုင်ပါပြီ။ သင်တန်းကြေးများကို ဤနေရာတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ဤသင်တန်းများမှာ အင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည် (၄)မျိုးစလုံး ပိုမိုတိုးတက်လာစေရန် ခေတ်မီသင်ကြားရေး အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများစွာဖြင့် သင်ကြားပို့ချပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက British Council Customer Service & Sales Department ဖုန်းနံပါတ် ၂၅၆၂၉ဝ ၊ ၂၅၆၂၉၁ (လိုင်းခွဲ - ၃၃၂၅, ၃၃၂၆, ၃၃၁၈) သို့ တနင်္လာနေ့မှ စနေနေ့ နံနက် (၈:၃ဝ) မှ ညနေ (၆:၃ဝ) အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်နိုင်ပြီ enquiries@mm.britishcouncil.orgသို့လည်း အီးမေးလ်ပို့၍ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ဗြိတိသျှကောင်စီမှ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများကို အသက်အရွယ်အလိုက် ပိုင်းခြားထားပါသည်။
အသက်(၇)နှစ်မှ (၉)နှစ် - Primary Learners
အသက်(၁၀)နှစ်မှ (၁၂)နှစ် - Tween Learners
အသက်(၁၃)နှစ်မှ (၁၅)နှစ် - Secondary Learners
အသက်(၁၆)နှစ်မှ (၁၇)နှစ် - Young Adults
အသက်(၁၈)နှစ်နှင့် အထက် - Adult Learners
Placement Test Timetable for Jan 2013 Classes
Primary & Tween
Note: Kindly be informed that all the placement test sessions from 10th Jan 2013 has been shifted to 11th Jan 2013. So, there's no placement test sessions on 10th Jan 2013!
Related Link: IELTS TEST AND REGISTRATION DATES 2013
Permalink Reply by Soe Thet Htun on November 18, 2012 at 15:17
Permalink Reply by Ummay Ayman on November 30, 2012 at 10:52
Those who are above 18 years can join the Adult learners courses.
Permalink Reply by Mya Thu Zar Aye on November 19, 2012 at 9:14
အသက် ၃၀ ကျော်တွေက..test စာမေးပွဲကို..ဆယ်ကျော်သက်တွေနဲ့အတူတူဝင်ရောက်ဖြေဆိုလို့ရပါသလား..သိချင်ပါတယ်..english က အမြဲ သုံးနေကျမဟုတ်တော့..မရဘူး..ဒါကြောင့်..မေးကြည့်တာပါ..ပြန်လည်ဖြေပေးစေလိုပါတယ်။။
Permalink Reply by Ummay Ayman on November 30, 2012 at 10:59
Those who are above 18 years can join our adult placement test sessions and adult learner courses.
Permalink Reply by Poe Poe on December 12, 2012 at 12:02
is there any Sat/Sun for the Placement Test. because i'm working thus's why i won't join the test which held between Mon to Fri. Please Reply me.
Permalink Reply by aunghtedmyat on November 21, 2012 at 8:55
Permalink Reply by April yin min tun on November 21, 2012 at 16:34
Can we take from on line?
Permalink Reply by Ummay Ayman on November 30, 2012 at 11:01
I am sorry to inform you that the British Council doesn't provide on line placement testing sessions.
Permalink Reply by Malar Win on November 27, 2012 at 11:56
Do you have special class on weekends?
Permalink Reply by Ummay Ayman on November 30, 2012 at 11:06
Dear Malar Win,
Sorry to inform you that there isn't any weekends classes for the moment. We will advertise via this page if we have any plan to open the weekend classes. So, keep in touch with us.
Permalink Reply by kyawminthant on November 27, 2012 at 22:57
Permalink Reply by zunpwintphyu on November 29, 2012 at 9:22